धोकाभन्दा पनि बढी खतरनाक हुन्छन् पार्टनरका यी ६ बानी, हुनसक्छ यस्तो समस्या!!! – News Nepali Dainik
धोकाभन्दा पनि बढी खतरनाक हुन्छन् पार्टनरका यी ६ बानी, हुनसक्छ यस्तो समस्या!!!
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ०३, २०७७ समय: २१:०४:२८
जब तपाईं सम्बन्धमा हुनुहुन्छ तपाईंहरु बीचको विश्वास नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हुन्छ जसले सम्बन्धलाई सधैं जीवन्त राख्न सहयोग गर्दछ। तर कहिलेकाँही हामी सम्बन्धमा रहँदा यस्ता काम गर्छौं जुन पार्टनरलाई धोका दिनुभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ ।
*) झुटो बोल्नुः
हामीले वाल्यकालदेखि नै सिक्दै आएका छौं, झुटो कुराको आयु लामो हुँदैन । तर पनि हामी आफ्ना पार्टनरसँग स–साना कुरामा झुटो बोल्छौं।
तर तपाईंले यसबारे बच्नुपर्छ अझ विशेषगरी तपाईंको सम्बन्ध नयाँ छ भने। किनभने सम्बन्धको सुरुवात नै झुटबाट भयो भने त्यसमा जीवनको कुनै आनन्द हुँदैन।
**) आफ्नो सुविधाका लागि सम्बन्धमा रहनुः
तपाईंको सम्बन्ध सधैं एउटै स्तर र गतीको हुनुपर्छ भन्ने छैन । समय सँगै, एक अर्कालाई राम्रोसँग बुझ्ने क्रममा कुनै बेला तपाईंहरु बीच मतभेद उत्पन्न हुनसक्ला वा एक अर्कासँग असहजको स्थिती पनि सामना गर्नुपर्छ।
कहिले काँही समाजले के भन्लान् भन्दै एक अर्कासँग भित्रभित्रै झगडा गरेपनि बाहिर भने राम्रो देखाउन चाहनुहुन्छ। तर यसरी आफ्नो सुविधाका लागि सम्बन्धलाई तन्काउनुको साटो एकअर्कासँग छुट्टीएर बस्नु नै राम्रो हुन्छ। यसो गर्दा दुबैको दुःख कम हुन्छ।
***) कुरा नगर्नुः
धेरैजसो जोडीले तिललाई पहाड बनाइरहेका हुन्छन् । सम्बन्धमा यस्ता कुराहरुले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेका हुन्छ । तपाईं आपसमा झगडा गर्नुहुन्छ वा कुनै अन्य कारणले तपाईंको सम्बन्ध खराब भइरहेको छ, यसबारे कुराकानी गरेर समाधान निकाल्न सक्नुहुन्छ। कुराकानी गर्दा जस्तो सुकै ठूलो समस्याको पनि समाधान हुन्छ।
Last Updated on: January 16th, 2021 at 9:04 pm